FARITRA ANALAJIROFO: Ny 11 jolay ny fanokafana ny taom-piotazana. · déliremadagascar
FARITRA ANALAJIROFO: Ny 11 jolay ny fanokafana ny taom-piotazana.
Socio-eco	 30 juin 2017 R Nirina
Anisany fampidiram-bola an’ny faritra Analajirofo ny fanondrana lavanila mankany ivelany. Misy ny ampahany vola miditra amin’ny kitapom-bolan’ny faritra sy ny kaominina. Manana ny enti-manana hampandrosoana ny tanana ny faritra fa indrindra kaominina. Anterivava : Jacques RAMAROSON
Amin’ny 11 jolay ho avy izao ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny taom-piotazana 2017 ny voly lavanila raha ho an’ny faritra Analajirofo. Nambaran’ny lehiben’ny Faritra, Jacques RAMAROSON fa efa voalamanina avokoa fenitra rehetra mandritra ny fiotazana. Manomboka any amin’ny fitandroana ny filaminana izany.
Mampalaza faritra Analajirofo ny voly fanondrana lavanila. Nandritra ny fivoriana niarahany tamin’ireo Lehiben’ny faritra hafa manerana an’i Madagasikara, nifanakalo hevitra amin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny lavanila ny tenany.